Haddii Ay Markale Xasuuqi Doonaan Kooxda Maribor, Xaalada Dhaawacyadii Sadio Mane & Adam Lallana Iyo Waxyaabo Kale Oo Uu Jurgen Klopp Ka Hadlay. – WWW.Gool24.net
Haddii Ay Markale Xasuuqi Doonaan Kooxda Maribor, Xaalada Dhaawacyadii Sadio Mane & Adam Lallana Iyo Waxyaabo Kale Oo Uu Jurgen Klopp Ka Hadlay.
31/10/2017 Saed Balaleti
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa saxaafada soo hor fariistay goordhaweyd ka hor kulanka ay habeen danbe la ciyaarayaan Maribor ee ka tirsan wareega group-yada Champions League, iyadoo kulankii hore ay kooxdaan ku soo xasuuqeen 7-0.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaan doonayn in kooxdiisa Reds ayna wax dhayilsi ah ka samayn kulanka Champions Leaque ee ay Anfield ku soo dhawayn doonaan kooxda Maribor oo ay hore guul taariikhi ah garoonkeeda ugu soo gaadheen.
Klopp oo ka hadlaya xaalada taam ahaansah xidigaha kooxdiisa ayaa yidhi: “Anigu boqolkiiba boqol ma hubo, Ma hubo haddii ay taam wada noqon doonaan habeen danbe. Waa inaan sugno oo aragno. Tababarkeena caawa ayaa fursadaas ina siin doona. Haddii Dejan Lovren uu tababar sameeyo subixii intaas ayaa inoogu filan. Laakiin waqti xaadirkaan ka garanayo. Caawa iyo gaar ahaan subixii ayay noqon doontaa marka ugu horeysa ee aan ka fekero safka kooxda.
“Marnaba kuma qamaaro safka kooxda. Haddii ciyaaryahan uu dheelayo waxaan ka filanayaa inuu noqdo boqolkiiba boqol taam. Kama fekero inaan isku shaandheyn sameeyo. Waxaan ka fekeraa kaliya koox wada taam ah habeen danbe, waana intaas. Marka aan ka fekerayo safka kooxda, ciyaartii ugu danbeysay ayaa saameyn igu yeelata, ciyaarta soo socota marnaba saameyn iguma yeelato.”
Tababare Jurgen Klopp ayaa diiday in su’aalo laga weydiiyo arinta shaqsiga ah ee daafaca Craotia Dejan Lovren kaasoo taageere Liverpool ah uu ugu hanjabay inuu dilayo qoyskiisa. Markii uu suxufi isku dayay inuu wax ka weydiiyo waxaa durbadiiba soo dhexgalay agaasimaha warbaahinta kooxda kaasoo sheegay in tababaraha uu doonayo inuu arintaas si shaqsi ah ugala hadlo ciyaaryahanka.
Klopp oo ka jawaabaya haddii ay markale gumaad u gaysan doonaan Maribor ayaa yidhi: “Ka dib markii aan ku soo badinay 7-0, dad badan ixtiraam uma hayaan Maribor laakiin anaga waan u heynaa. Haka fekerin natiijadaas, marnaba ma ahan inaad ka fekerto natiijo ka hor ciyaarta. Haddii aan ku badino 1-0 iyada xitaa waa okay. Waxaan noqon doonaa kuwa boqolkiiba boqol diirada saara ciyaarta.”
Klopp oo ka hadlaya haddii ay kooxdiisu u soo baxayso wareega 16 ka kooxood ayaa yidhi: “Hamigeenu waa inaan ka soo baxno wareega group-yada. Waana intaas. Ilaa iyo haatan qaab ciyaareedyo fiican ayaan soo bandhigay. Anfield mar walba waa gaashaankeena. Waxaana ay taasi la micno tahay inaan u baahanahay inaan badino kulamada gurigeena. Waxaan dhamaanteen dooneynaa inaan u gudubno wareega xiga.”
Ugu danbayn Klopp ayaa ka hadlay xaalada Sadio Mane iyo Adam Lalla wuxuuna yidhi: “Waa ay fiican yihiin. Sadio saaka wuxuu maray tijaabo caafimaad ka hor inta uusan ku soo laabanin tababarka. Haatan kuma jiro kooxda sidaasi darteed berri wuu nasanayaa, ka dib Khamiista waa inuu tababarka ku soo laabto.
“Adam waxa uu qeyb ka noqon doonaa kooxda tababarka qaadaneysa marka lagu maqan yahay ciyaaraha caalamiga. Labadoodaba xaalad wanaagsan ayay ku jiraan laakiin taam uma ahan kulanka berri ama kan West Ham.”